Programme PROSPERERMAHAMBO - FENOARIVO ATSINANANA: MPANAO LOHA MENAKA 30 MIKAMBANA AO ANATY KOPERATIVA TAFARAY NO NAHAZO ALAMBIKA MANARA-PENITRA - Programme PROSPERER MAHAMBO - FENOARIVO ATSINANANA: MPANAO LOHA MENAKA 30 MIKAMBANA AO ANATY KOPERATIVA TAFARAY NO NAHAZO ALAMBIKA MANARA-PENITRA - Programme PROSPERER
MAHAMBO – FENOARIVO ATSINANANA: MPANAO LOHA MENAKA 30 MIKAMBANA AO ANATY KOPERATIVA TAFARAY NO NAHAZO ALAMBIKA…
MAHAMBO – FENOARIVO ATSINANANA: MPANAO LOHA MENAKA 30 MIKAMBANA AO ANATY KOPERATIVA TAFARAY NO NAHAZO ALAMBIKA MANARA-PENITRA
Kaoperativa novolavolain’ny Fandaharanasa PROSPERER ny TAFARAY ao Mahambo. Nanomboka tamin’ny taona 2016 ny tohana nentina voalohany toy ny fiofanana maro isan-karazany ho an’ireo mpandraharaha madinika mpikambana. Isan’ny tohana nentina ihany koa ny fampivondronana ireo mpandraharaha madinika ireo ho lasa kaoperativa matihanina. Tsara ho marihina fa manodina ravin-jirofo ho lasa loha menaka ny ifantohan’izy ireo. Miray saina fatratra ny samy mpikambana ka miroborobo ny asa fivelomany na dia telopolo monja aza ny mambra ao anatiny.
Mba hanatsarana izany asa fihariana izany, dia nangataka tohana ny Kaoperativa ny mba hampitaovana azy amin’ny antsasa-bidiny “alambika manara-penitra iray”. Taorian’ny fanadihadihana ny taratasy fangatahana dia tsapa fa tena liam-pivoarana ireto mpikambana ka avy hatrany dia neken’ny komity ny fangatahana fitaovana izay napetrany.
Mitentina 10 000 000 Ariary ny alambika manara-penitra iray ka 5 000 000Ar ny aloan’ny Fandaharanasa ary 5 000 000 Ar no anjaran’ny Kaoperativa mpahazo tombontsoa. Mbola mavesatra amin’ireo mpikambana ny handray antanana avy hatrany io ampaham-bola io ka nanao findramam-bola tamin’ny mpamatsy vola madinika izy ireo mba ahafahany mandoa an’ilay antsasa-bidin’ilay fitaovana. Nekena ny taratasy findramam-bola ka ny “Première Agence de la MicroFinance”(PAMF) any amin’ny faritra no mpamatsy, angady nananana sy vy nahitana.
Vokatr’izany, ny volana Aogositra lasa teo, tafapetraka soa amantsara teo anivon’ny Kaoperativa TAFARAY ao Ambalafary, Kaominina Mahambo ilay ALAMBIKA manara-penitra mahazaka 1 200 LITATRA, mifaraka amin’ny famaritana teknika nataony.
VOKATRA AZO TSAPAIN-TANANA ARY AZO ALAIN-TAHAKA EO ANIVON’NY FIARAHA-MONINA
15 ny mpandraharaha madinika mpikambana ao anaty Kaoperativa TAFARAY no efa nampiasa izany fitaovana izany. 252 Litatra no loha menaka jirofo efa voahodina. Ary ny orinasa SPICE and OIL ny mpividy vokatra efa nanaovana sonia fifanarahana ara-barotra.
Marihina fa mahatratra 07 litatra ny loha menaka azo indray mahandro ary mandritra ny adiny efatra ka hatramin’ny adin’ny enina no faharetany. Isan’ny mitsitsy kitay ihany koa ity Alambika ity satria kitay manodidina ny 5 000 Ar no lany amin’ny ahandro iray vilany.
Niteraka fidiram-bola ho an’ny Kaoperativa ity ALAMBIKA manara-penitra ity nohon’ny voka-tsoa entiny. Mifanao tohivakana ny mpanodina loha menaka ao antoerana manofa azy hany ka efa lasa sahirana ny mpikambana manao ny fandaminana. 137 ny mpanodina loha menaka, ivelan’ny fikambanana efa nanofa ity fitaovana ity ary efa nahatratra 374,50 litatra sahady ny loha menaka azo tamin’izany tao anaty volana vitsivitsy monja. Mba ho fandaminana sy hikojakojana ny fitaovana dia 0,50 litatra no hofan’ny indray mahandro ka eo ho eo amin’ny 17 000 Ariary raha tombanana amin’ny vidin’ny loha menaka amin’izao fotoana izao.
Tsy mijanona amin’ny famokarana zanakazo sy loha menaka ihany ireto Koperativa ireto fa mioty vokatry ny jirofo ihany koa isaky ny fitaom-piotazana. Izany hoe ny jirofo dia mampidi-bola ho an’ny mpandraharaha madinika miantomboka amin’ny famokarana zanakazo, fiotazana ny voany ary miafara amin’ny fanodinanana loha menaka.
Raha ny tombatombana dia ho voaloa amin’ny ara-dalàna amin’ny ny volana Novambra 2019 ho avy izao ny vola nindramin’ny Kaoperativa nandoavana ny antsasa-bidiny.
Efa mikasa ny hividy ALAMBIKA iray fanampiny ireo mpikambana raha ny dinika niarahana.
Aujourd'hui : 15 vues | Cette semaine : 1187 vues | Total : 6480 vues